Nar Bahadur Ghimire Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Nar Bahadur Ghimire
कविता : कमरेड तिम्रो भाउ, कति लगायो?
~नरबहादुर घिमिरे~ कमरेड, तिम्रो भाउ कति लगायो उसले र तिमीले तिम्रो चेतना किलोको भाउमा सुम्पियौं? भन कमरेड भन… रक्त क्रान्तिका कुराहरु फुकेर तिमी बुर्जुवाको भक्त बन्यौ? भन कमरेड भन.. तिमीले हाम्रो गाउँको भाउ कति सोचेका छौं ? हाम्रो समाजको, हाम्रो … Continue reading →